Veracruz ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံ၊ မက္ကဆီကန်နှင့်စပိန်ယဉ်ကျေးမှုများပေါင်းစပ်ခြင်း ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | ယဉျကြေးမှု, မက္ကစီကို
Veracruz ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံသည်တစ်ဖက်တွင်ဤမက္ကဆီကန်ပြည်နယ်၏ autochthonous အလွှာနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်စပိန်ကိုလိုနီများ၏သြဇာကိုတုံ့ပြန်သည်။ Veracruz inရိယာနှင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းရှိမြို့တိုင်းမှန်ကန်သည် သူတို့ကိုယ်ပိုင် ပုံမှန်အဝတ်အစားပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနှင့်၎င်း၏မြို့တော်နှစ်ခုလုံးကိုသတ်မှတ်ပေးသည့်ဝတ်စုံတစ်ခုရှိသည်။
Veracruz ၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကတည်းကကတည်းက မက္ကစီကို ပူနွေးသောအပူပိုင်းရာသီဥတုရှိသည်။ ၎င်း၏ပုံမှန်အဝတ်အစားများသည်အင်အားအားဖြင့်၊ နှစ်ဆယ်ဒီဂရီကျော်လွန်သောပျမ်းမျှအပူချိန်များသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပူနွေးသောအဝတ်အစားဖြင့်သည်းခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသောအခြားဒြပ်စင်များစွာရှိပါသည် Veracruz ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံ။ သူတို့ကိုသင်သိလိုလျှင်ဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 Veracruz ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံ၏သမိုင်း
2 Jarocho ဝတ်စုံကဘယ်လိုလဲ
2.1 အမျိုးသမီးများအတွက်ပုံမှန် Veracruz ဝတ်စုံ
2.2 လူတို့အတွက် Veracruz ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံ
3 ဘယ်အချိန်မှာပုံမှန် jarocho ဝတ်စုံကိုအသုံးပြုသည်
ပထမဆုံးသင်ပြောသင့်သည်မှာ Veracruz သည်ပြည်နယ်ကိုအသုံးပြုသည် charro ဝတ်စုံ နှင့် တီဟွာနိုဗီရို။ အဆုံးစွန်သောပြည်နယ်၏ Zapotec အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Oaxaca နှင့်ပန်းချီဆရာအားဖြင့်မသေဆုံးခဲ့သည် Frida khalo မိမိအပန်းချီကားအများအပြား၌တည်၏။ သို့သော်၎င်းနှင့်ပထမနှစ်ခုလုံးသည်မက္ကဆီကို၏ကမ္ဘာ့သင်္ကေတများဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ Veracruz နဲ့တူတယ်ဆိုတာမအံ့သြပါဘူး။
ငါတို့အားလုံးရှင်းပြပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့် Veracruz ၀ တ်စုံနှင့်ထူးကဲသောဝတ်စုံကိုခေါ်သည် jarocho ဝတ်စုံဒါခေါ်ရာမှလာသည် Sotavento Veracruzanoဆိုလိုသည်မှာပြည်နယ်တစ်ခု၏တောင်ဘက်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာဖော်ပြသောပြည်နယ်၏ဒေသဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီမတ်မတ်ဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်။
စပိန်လူမျိုးများနှင့်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးများရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည် Papaloapan အင်တုံ Iberian ကျွန်းဆွယ်မှယူဆောင်လာသည့်အဝတ်အစားများကိုသူတို့ဝတ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့သည် Andalusian သို့မဟုတ် Levantine စတိုင်ဝတ်စုံများ မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာအထည်နှင့်အတူလုပ်လေ၏။ သို့သော် Veracruz ၏ဤinရိယာ၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်အလွန်ပူပြင်းပြီးအပြင်၌စိုထိုင်းဆလွှမ်းမိုးနေသည်။ ထို့ကြောင့်အေးခဲသောရာသီဥတုများအတွက်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်စပိန်နိုင်ငံမှယူဆောင်လာသည့်အဝတ်အစားမှာမသင့်လျော်ပါ။
ဤအမျိုးသမီးဝတ်စုံများတွင်ရောင်စုံစကပ်၊ ပန်းထိုးခါးစည်း၊ ဇာကြိုး၊ ချည်များနှင့်ကတ္တီပါဖိနပ်များပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်ပိုးသို့မဟုတ်ကတ္တီပါကိုယ်ထည်၏ဖဲကြိုးများဖြင့်လည်ပင်း၌ချိတ်ဆွဲထားသောတံဆိပ်များဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်။
သို့သော်ဇာတိအမျိုးသမီးများသည် ၀ တ်ရသောဇာ၊ ပခုံးများကျသည့်ဖိနပ်များနှင့်ဖိနပ်များပါ ၀ င်သည့်ပန်းပွင့်စကတ်များနှင့်အင်္ကျီများ ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ စပိန်တွေကဘယ်လိုနားလည်ကြသလဲ ပိုပြီးသင့်လျော်သောဒီအဝတ်အစား Veracruz ရာသီဥတုအတွက်သူတို့သည်စပိန်နိုင်ငံမှယူဆောင်လာခဲ့သည့် ၀ တ်စုံများကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြသည်။
အချို့သောဟစ်စပန်းနစ်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အတူဒေသခံဝတ်စုံအရောအနှောအဖြစ်, အ jarocho ဝတ်စုံယောက်ျားအဘို့အအလားတူပုံစံများကိုမွေးစားသော။ ထို့ကြောင့် peninsular ဖက်ရှင်နှင့် Sotavento Veracruzano ကနေဇာတိတ ဦး တည်းအကြားတစ် ဦး ပေါင်းစပ်ဖြစ်စဉ်ကို။ ထို့အပြင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အဆင်တန်ဆာများကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သမိုင်းတစ်နည်းနည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့် Veracruz ၏ ၀ တ်စုံသည်မည်သည့်ပုံသဏ္concာန်ဖြစ်ကြောင်းတိကျစွာနှင့်အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်အချိန်ဖြစ်သည်။
ယုတ္တိနည်းအရ၊ Veracruz ၏ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ရန်အမျိုးသမီးများအတွက်အဝတ်အစားနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အဝတ်အစားများကိုခွဲခြားရမည်။ သို့သော်၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးတွင်ပိုင်းခြေနှစ်ခုရှိသည်။ အဖြူရောင်အရောင်နှင့်အလင်းပိတ်ထည် အပူများအတွက်သင့်လျော်သော။
အမျိုးသမီးများအတွက်ပုံမှန် Veracruz ဝတ်စုံ
အမျိုးသမီးများအတွက် Jarocha အဝတ်အစားဖြစ်သည် တောင်မှလှပသော ဒါကြောင့်ရှိပါတယ်ကတည်းကလူတို့အဘို့ရည်ရွယ်ထားထက် ပိုပြီးဇာ, ပန်းနှင့်အဆင်တန်ဆာ။ ဒီဝတ်စုံ၏အခြေခံဒြပ်စင်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးအစားတစ်ဘလောက်စ် နိုက်ကလပ် ပခုံးနှင့်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်ဝါဂွမ်းနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အဖြူရောင်။ ဆိုလိုသည်မှာထိုအစိတ်အပိုင်းများတွင်၎င်းတို့သည်ဇယားကွက်ပုံစံဖြင့်ပန်းထိုးထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပိုးဖဲကြိုးနှင့်ပြုလုပ်ထားသောသံထည်တစ်လုံးဖြင့်လည်ပင်းတွင်အဆုံးသတ်ထားသည်။
Petticoat သည်လည်းအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ခံတွင်အသုံးပြုသောအောက်ခြေတွင်လည်း grided ထားသည်။
una စကတ် အလွန်ရှည်လျားပြီးကျယ်ပြန့်သောခြေဆတ်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်များသောအားဖြင့်အဖြူရောင်လည်းရသောအသေးသေးပေါ်မှာပျံသန်း။ အလားတူပြုလုပ်နှင့်အတူတန်ဆာဆင်ထားသည် ပန်း များသောအားဖြင့်ရှိသည် ကော်နည်းနည်း.
ခါးစညျးရှေ့ဖုံး အနက်ရောင်ကတ္တီပါတွင်တိုတောင်းပြီးအနီရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပန်းများနှင့်လည်းကောက်ကောက်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ခါးကိုချည်ထားသည် ပိုးဖဲကြိုး သူ၏ခါး၌လည်းရှိ၏ bandana နှစ်ခု - ရောင်စုံပုံနှိပ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကြီးမားသောလက်ကိုင်ပဝါ - ချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
una မန်လန် သို့မဟုတ်ဇာသို့မဟုတ်ပန်းထိုး Tulle ၏လုပ်နိုင်သော shaw ။ ၎င်းကိုရင်ဘတ်နှင့်ချိတ်ထားသည့်ပခုံးများပေါ်တွင်တင်ထားသည် locket သို့မဟုတ် cameo အောက်မှာ nightgown ၏ကွက်လပ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်။
Un shawl သို့မဟုတ်ပိုးချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒုတိယအကြိမ်ရှပ်သည်ဆံပင်ကိုအလှဆင်ထားသောဖဲကြိုးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
jarocho ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး
အထက်ပါအချက်များအားလုံးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများအတွက် Veracruz ၀ တ်စုံတွင် ၀ တ်ဆင်သည် ကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ y တိကျတဲ့ဆံပင်။ အဆုံးစွန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည်ခေါင်းတလုံးနှင့်ခေါင်းတလားနှင့်တင့်တယ်သောကျစ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ cachirulo။ နောက်ဆုံးတွင်ဆံပင်ကိုဥယျာဉ်မှူးသို့မဟုတ်နှင်းဆီပန်းများဖြင့်အလှဆင်။ လူတစ် ဦး ၏အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ တစ်ဖက်သို့မဟုတ်ခေါင်းတစ်ဖက်၌ထားရှိသည်။ အကယ်၍ သူသည်တစ်ကိုယ်ရေနေလျှင်လက်ဝဲဘက်သို့သွားပြီးလက်ထပ်လျှင်လက်ယာဘက်သို့သွားသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ပုံမှန် Veracruz ဝတ်စုံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ က ပန်ကာ တစ် ဦး အားဖွငျ့လည်ပင်းကနေဆွဲထားကြ၏ လည်ပတ်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်တစ်မိသားစုရတနာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုရွှေ၊ ပုလဲတို့နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသန္တာကျောက်တန်းသို့မဟုတ်အရုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံး၌အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုလည်းကတ္တီပါဖဲကြိုးအားဖြင့်လည်ပင်းတစ်ဝိုက်တွင်ဝတ်ဆင်သည်။
လူတို့အတွက် Veracruz ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံ
အလွန် ပိုမိုလွယ်ကူသည် အထက်ဖော်ပြပါအချက်သည်အမျိုးသားများအတွက်ပုံမှန် Veracruz ဝတ်စုံဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်လှပပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ, အ ၀ တ်အထည်များ၏အဖြူရောင်အရောင်ကိုဆိုလိုသည်။ ဤကိစ္စတွင်အရေးကြီးဆုံးမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
Un ဘောင်းဘီ အခြားအ ၀ တ်အစားများနှင့်မတူဘဲခြေထောက်အထိရောက်ရှိနေသည့်လတ်ဆတ်သောအထည်အလိပ်သည်အိတ်ငယ်သို့မဟုတ်ဒူးခေါင်းမဟုတ်ပေ။
una လှိုင် သို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီအရှည်များပါ ၀ င်ပြီးရှေ့တွင်အိတ်များပါ ၀ င်သောအ ၀ တ်အထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာအစများသောအားဖြင့်ကကြော့ရှင်းတဲ့ထိပေးရ pleats ရှိပါတယ်။
ဖိနပ်ရိုက်ပါ လုယူရာ နှင့်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်အရောင်။
Palm ဦး ထုပ် ၎င်း၏areaရိယာ ("ကျောက်များ" ဟုခေါ်သည်အဘယျသို့) တွင် XNUMX အလျားလိုက်အပေါက်အတူ။
ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြပြီးခင်ဗျားတို့ဖော်ပြချက်အရခင်ဗျားတို့အမျိုးသားတွေအတွက် Veracruz ၀ တ်စုံကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုနည်းနည်းလေးပိုပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်။ သို့သော် ဒီနှင့်အတူperfectlyုံပေါင်းစပ်.
ပုံမှန်ဝတ်စုံနှင့်အတူ Veracruz နိုင်ငံသားများအုပ်စု
ဘယ်အချိန်မှာပုံမှန် jarocho ဝတ်စုံကိုအသုံးပြုသည်
ယေဘုယျအားဖြင့် jarocho ဝတ်စုံကိုအသုံးပြုသည် မည်သည့် folkloric ဖြစ်ရပ် ဒါမှမဟုတ် Veracruz ပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့အားလပ်ရက်။ များစွာသောရိုးရာအကအဖွဲ့များသည်၎င်းကိုအနက်ဖွင့်ရန်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုကြသည် သူတို့ဟာ jarocho (သို့) zapateado တွေပါ။ ကံနှစ်မျိုးရှိတယ်။ စုံတွဲတစ်တွဲအသံ နှင့်ဒါခေါ် "အမှိုက်ပုံကနေ" အုပ်စုတစ်စုအတွက်ကခုန်သည်။
ပူးတွဲပါတေးဂီတကိုဖွင့်သည် အညီအမျှရိုးရာတူရိယာ jarana၊ ဂစ်တာသေးသေးလေးလို၊ ယခင်မိသားစုကဲ့သို့တူညီသောမိသားစုမှ requinto; တယော၊ ပတ်သာနှင့်မြည်းမေးရိုး၊ သူတို့အားလုံးမှတစ်ဆင့်အနက်ဖွင့်ကြသည် တောင်သူလယ်သမားဇာစ်မြစ်၏ဂီတအချို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ဥပမာ, လာဘမ်ဘာ, အဆိုပါ hustler o အရူးရည်.
သူတို့ကလည်းအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနေကြသည် ကွမ်းခြံကုန်းဒေသတွင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော ternary time signature ရှိသီချင်းများနှင့်ထင်ရှားသောကျူးဘားဒန်ဇုန်ကဲ့သို့သောအာဖရိက - ကာရစ်ဘီယံမူရင်းစည်းချက်များပင်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်လည်းဤအခမ်းအနားများကျင်းပသည့်အခါသိရန်စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် Veracruz သို့သင်သွားလိုပါကသင်၏ခရီးစဉ်သည်သူတို့နှင့်အတူတူဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညွှန်ပြရက်စွဲတစ်ခုဖြစ်သည် ပွဲတော် Veracruz ၏ကိုယ်နှိုက်မှ "ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပျော်ရွှင်ဆုံး" ဖြစ်သည်။
သို့သော် Jarocho ကမ္ဘာသည်မြို့တော်၌နေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် Jaltipan, Veracruz သူ့ဟာသူပြည်နယ်မှ။ ယခုနှစ်အကုန်တွင်ဤမြို့သည်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည် Fandango ပွဲတော်တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်ပြည်ပမှလူကြိုက်များသောဂီတအနုပညာရှင်များကိုစုစည်းပေးသော။ ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာ jarocho အသံနဲ့ကခုန်တာမရှိဘူး။
အလားတူပင် Jarocha ဓလေ့ထုံးတမ်းမှာလည်းCórdobaမြို့တွင်နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသည် Lomas က de Huilangoကစုစည်းသောအချက်အထိ သားတော် Jarocho တှေ့ဆုံ အရာ Veracruz ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံနှင့်အတူရှိုးများပါဝင်သည်။ Veracruz ပြည်နယ်၏ဤရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများ၊
နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မြို့အကြောင်းပြောပြပါမယ် သပိတ်မှောက်၎င်းသည် Papaloapan ဝှမ်း၏ကန့်သတ်ချက်တွင်တည်ရှိပြီးထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့ jarocho ဝတ်စုံကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ အဘယ်သူ၏သမိုင်းဝင်စင်တာကြေငြာခဲ့ပြီးဒီလှပသောမြို့, လူသား၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အပေါ်ဂုဏ်ပြုသည် Jaraneros နှင့် Decimistas ၏အစည်းအဝေး။ ၎င်းသည်သား jarocho တွင်အတူတကွစုစည်းထားသောဂီတအသုံးအနှုန်းများအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည့်ပွဲတော်ဖြစ်ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏အရေးအကြီးဆုံး folkloric ဖြစ်ရပ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ရင်းမြစ်၏ရင်းမြစ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည် ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံ Veracruzအမျိုးသမီးများရောအမျိုးသားများပါ ၀ တ်ဆင်သောအဝတ်အထည်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ၀ တ်ဆင်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးပွဲတော်များမှာမည်သည်နည်း။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုရိုးရာအ ၀ တ်အစားတစ်ခုဖြစ်သည် ပိုပြီးအမြစ်တွယ်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးတန်ဖိုးထား မက္ကဆီကန်တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » မက္ကစီကို » Veracruz ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံ
စွန့်စားမှုချစ်သူများအတွက်ထိပ်တန်းခရီးသွားစာအုပ် ၁၀ စောင်